Biyya Oromoo Keessatti Biyya Biraa Ijaarun Itti Fufe! – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORG
On March 13, 2017 By OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORGIn oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org
Ummanni Oromoo saba guddaa, saba aadaa, seenaa fi duudhaa guddaa qabuudha. Ummanni kun biyya mataa isaa, biyya barootaaf irra jiraachaa ture ummata qabuudhasi. Biyya isaa keessaattis akkuma seenaan ragaa bahutti ummata sirna bulchiinsaa mataa isaa diriirsee ykn ijaarratee seeraa fi sirnaan, nagahaan wal bulchaa tureedha.
Ummanni Oromoo dachee badhaatuu lafa facaasanii irraa hammaarratan, horanii irra yaasan qabu ta’unis dhugaa iafa jiruudha. Walumaa galatti ummanni Oromoo ummata aadaa, seenaa fi dhuudhaa akkasumas qabeenya ummamaa hammaramee hin dhumne qabudha jechuutu danda’ama.
Kun yakka sanyii balleessuu isa olaanadha Genocide. Gocha calliufamee ilaalamuu qabus miti. Babalanni maqaa maastar pilaanitiin taasifamuuf ture Oromoon dhiiga isaatiin ofirraa ittiseera. Haata’uutii yakki Oromoo qayee fi qabeenyarraa buqqisuu karaa adda addaatiin akkuma itti fufeetti jira. Biyya Oromoo Finfinnee keessatti biyyi biraa ijaaramaa jira. Kana hubachuu fi itti dammaquun falmii eegalame jabeessanii itti fufuun ammoo dubbii fardii fi murteessadha! Baarentuu Gadaa Irraa